बुनु चौधरी सोमवार, चैत्र १४, २०७३
11781 पटक पढिएको
सामान्यतया कागज, फ्रेम अथवा घरको भित्तामा चित्रकारहरूले क्यानभास बनाएको देखिन्छ । तर, सिंगो शहरलाई नै क्यानभासमा जोडेको उदाहरण विरलै हुन्छ । ऐतिहासिक र सुन्दर शहर कीर्तिपुर नै अहिले क्यानभासमा उतारिएर रंगीन बन्दैछ । केही युवा कीर्तिपुरका घर–घरमा रातो र सुन्तला रंग लगाउँदैछन् । त्यो पनि घरको आधा भागमा मात्र । यसरी पोतिएको घर देख्दा जोकोही अचम्ममा पर्छन् ।
उनीहरू अनौठो मान्दै फर्की–फर्की हेर्छन् । आखिर के गर्दैछन् त यी युवा, आधा घर मात्रै रंगाएर ? कला नेतृत्वकर्ता अमृत कार्की भन्छन्, ‘यो कन्टेम्पोररी आर्ट इभेन्टको नमुना हो ।’ कीर्तिपुरलाई क्यानभासमा हेर्ने इच्छा विगत दुई वर्षदेखि नै सँगालेको बताउने कार्कीलाई यो अवसर जुटाएको हो, काठमाडाँै ट्रिएनाले । उनले अनुभव सुनाए, ‘हामी तपाईंको शहरलाई क्यानभासमा उतारेर नयाँ कार्य गर्दैछाँै । तपार्इंको घरमा यसरी ‘पेन्ट’ गर्नेछौँ भनेर कीर्तिपुरवासीलाई मनाउनै दुई महिना लाग्योे ।’
काठमाडौं ट्रिएना नेपालको सबैभन्दा ठूलो समकालीन कला महोत्सव हो । यो हरेक तीन वर्षमा आयोजना गरिन्छ । आर्टमा केही नयाँ गर्ने सोच बनाएका २६ वर्षीय कार्कीले फाइन आर्टमा भर्खरै स्नातक तह पूरा गरेका छन् । उनले यसअघि पनि विभिन्न विषयका संयुक्त कला प्रदर्शनी गरिसकेका छन् । नेपालका विभिन्न कलाकारलाई छनोट गरी कीर्तिपुरलाई नयाँ ‘आउटलुक’ दिन पाएकामा उनी दंग छन् ।
कीर्तिपुर ऐतिहासिक र सौन्दर्यले भरिपूर्ण शहर भएकाले छनोटमा परेको जनाउँदै कार्की भन्छन्, ‘हामीले एउटा ले–आउट डिजाइन गरेका छौँ, जसअनुसार ‘रेक्ट्यांगुलर सेप’ मा घरहरू रंगाउनेछौँ ।’ यो अभियान २४ फागुनदेखि शुरु गरिएको थियो । यस काममा ५० जनाभन्दा बढी स्वयंसेवक खटिएका छन् । तीमध्येकी दुर्गा सुनुवार भन्छिन्, ‘मलाई सिनियर आर्टिस्टहरूसँग काम गर्न पाउँदा निकै खुशी लागेको छ । केही नयाँ सिक्न पाइराखेकी छु । कहिले नगरेको घर रंगाउने काम गर्दा म त एकदम रमाएकी छु, एडभेन्चरजस्तै लागिराखेको छ ।’
हाम्रो घरमा आधा मात्र रंग लगाएर यत्तिकै छोडिदिनुहुन्छ त ? जवाफमा कार्की भन्छन्, ‘मैले जसरी भए पनि कन्भिन्स गराएको छु, पछि रिपेन्ट गरिदिन्छाँै पनि भनेका छौँ । कति घरधनीले त तपार्इंहरूको काम राम्रो छ भनेर सुझाव पनि दिएका छन् ।’ पर्फमेन्स पेन्ट, पेन्टिङ थुप्रै आर्टमा दक्खल राख्ने कार्की विभिन्न संघसंस्थासँग आवद्ध छन् । पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवार, पोखराको क्रिएटिभ आर्टिस्ट गु्रपलगायत संस्थामा आवद्ध उनी भन्छन्, ‘अहिलेलाई मेरो उद्देश्य कीर्तिपुर शहरलाई क्यानभासको रूपमा देख्न चाहनु हो ।’
काठमाडौँ ट्रिएना ११ चैतदेखि २७ सम्म आयोजना हुँदैछ, जसअन्तर्गत २५ मुलुकका ६० भन्दा बढी कलाकारले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बसी कला सिर्जना गर्दैछन् । नेपालबाट १७ जना छनोट भएका छन् । तीमध्येकै हुन्, कार्की पनि । सिद्धार्थ आर्ट फाउन्डेसन र समकालीन कला संग्रहालय र गेन्ट बेल्जियमले यस वर्षको काठमाडौँ ट्रिएना संयुक्त रूपमा आयोजना गर्दैछन् ।
सबै कलाकृति महोत्सवको उल्लेखित विषयमा शहर र शहरीकरणमा आधारित हुनेछन् । चित्र, मूर्ति, लोक र प्रतिस्थापन कला तथा फोटोग्राफी आदि समसामयिक अभ्यासबाट बनाइएका कला पनि राखिनेछन् ।प्रदर्शनी भने तारागाउँ संग्रहालय बौद्ध, नेपाल आर्ट काउन्सिल बबरमहल, सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरी बबरमहल, पाटन संग्रहालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड प्रदर्शनी मार्ग, टंगालउड साथै काठमाडौँ र ललितपुरका विभिन्न स्थानमा हुँदैछ ।
प्रदर्शनी निःशुल्क अवलोकन गर्न पाइनेछ । पहिलो पाँच दिनसम्म सांगीतिक, सांस्कृतिक, भावनाटीका कला र विचार गोष्ठी पनि आयोजना गरिने आयोजकको भनाइ छ । बालबालिकादेखि, युवा, विद्यार्थी र सर्वसाधारणलाई समेत कलाको माध्यमबाट सामाजिक विषयमा सहभागी गराउन कला महोत्सव आयोजना गरिँदैछ ।